राष्ट्र बैंकको बम्पर स्किमले शेयर बजारमा उछाल, नेप्से ३० अंकले उक्लियो, ७० करोडको कारोबार – Taza Post
राष्ट्र बैंकको बम्पर स्किमले शेयर बजारमा उछाल, नेप्से ३० अंकले उक्लियो, ७० करोडको कारोबार
नेपाल राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले बुझाएका अधिकांश सुझाबहरु एकैसाथ कार्यान्वयन ल्याउन निर्देशन जारी गरेकै दिन शेयर बजारमा उछाल आएको छ । बुधबार नेप्से सूचक ३० अंक बढीले उकालो लाग्दा झण्डै ७० करोड बराबरको शेयर किनबेच भएको छ ।
मंगलबार नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवि नेपालले अर्थ समितिको बैठकमा एक दुई दिनमा कार्यदलले दिएको सुझाबका आधारमा निर्देशन जारी हुने बताएका थिए ।
शेयर बजारका समस्याहरु सम्बोधन हुने आशामा बजार खुल्नासाथ लगानीकर्तामा केहि उत्साह देखियो । कारोबार खुलेको सुरुवाती समयमै बजारले बढ्ने संकेत देखायो ।
बजार चलिनै रहदा एक्कासी राष्ट्र बैंकको निर्देशन आयो । यसले शेयरबजारमा थप उत्साह जागेपछि बजार तथा कारोबार रकम बढ्न थाल्यो । बुधबार नेप्से ३०.२६ अंकले बढेर १२१६.२७ अंकमा पुगेको छ । यसदिन १७३ कम्पनीको १९ लाख १०३ कित्ता शेयर ६९ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरमा किनबेच भए ।
राष्ट्र बैंकले रिस्क वेटेज १०० मा झार्यो, शेयर धितोकर्जाको सीमा ६५ प्रतिशत, अरु के-के भयो ?
स्प्रेड दर घटाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन, तोकेको समयभित्र नघटाए कारबाही
कारोबारमा आएका सबै समूहका सूचका उकालो लाग्दा १६२ कम्पनीको शेयरमूल्य बढेको छ भने ११ कम्पनीको शेयरमूल्य मात्र घटेको छ । आधादर्जन कम्पनीको शेयरमूल्य झण्डै दश प्रतिशतका दरले बढेको छ । सबैभन्दा धेरै नेपाल बैंकको चार करोड ३६ लाख बराबरको शेयर किनबेच भयो ।
राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दर घटाएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा ४५ बाट बढाएर ५० प्रतिशत पुर्याएको छ । आधार दर गणना विधि परिमार्जन गरेको छ ।
यसैगरी शेयर धितो कर्जा दिँदा मूल्यांकनको ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ६५ प्रतिशत गरेको छ । रिक्स वेटेजलाई १५० बाट १०० प्रतिशतमा झारेको छ । शेयर धितो ऋण दिने सीमा बढाएर कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्याएको छ ।
त्यस्तै बैंकहरुलाई सहायक कम्पनी खोली शेयर ब्रोकरको काम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।(source)
Previous NCC Bank’s 79.10 lakh unit right shares to be sold via auction from today; Paid-up capital to reach Rs 7.01 arba
Next नेप्सेमा उछाल आउँदा १० प्रतिशतले कमाउने यी हुन् आधा दर्जन कम्पनी